aad ee Kanada ka USA ka heli kartaa magangelyo? | USAHello | USAHello
aad ee Kanada ka USA ka heli kartaa magangelyo?
Waxa uu isku dayayaa magangelyo si aad u hesho in Kanada doorasho nabad ah adiga iyo qoyskaaga? Baro halista ka hor intaadan go'aansan inuu ka tago USA.
mustaqbal aan la hubin ee USA
Qaar ka mid ah qaxootiga, Entry Level, iyo dadka kale ee muhaajiriinta dareensan aan la hubin oo ku saabsan mustaqbalka ee dalka Mareykanka. Qaar badan oo ku jirey USA ee sano. Waxay leeyihiin qoysaska, guryaha iyo shaqooyinka. Iyagu ma ay dareemin ammaan, laakiin waxa ay noqon karaan khatar inay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo.
Sidoo kale, Waaxda Homeland Security ayaa qorshaynaysa in ay soo afjarto TPS for kun oo qof. Qaar badan oo haysta TPS yeelan doonaa inuu ka tago United States ama waxay la masaafurin doono.
Tegaayo in ay isku dayaan si ay u helaan magangelyo Kanada
Muhaajiriinta ee USA ayaa la tago in ay isku dayaan si ay u helaan magangalyo ee Kanada. Waxay aaminsan yihiin waxa ay noqon doontaa si fudud loo heli-doonka waxaa.
Laakiin dadka intooda badan kuwaas oo soo geli Kanada xadka rasmi ah ka Maraykanka ma ka dhigi kartaa codsigaaga qaxootiga ee Kanada a. Tani waa sababta oo ah heshiis ka dhexeeya labada dal. Sidaas kun oo muhaajiriin ah ayaa la soo gudbaya xuduudda aan rasmi aheyn. Waxay rajeynayaa in aad dalbato magangalyo mar ay yihiin dalka gudihiisa.
Waxyaabo badan aad maqalay ama akhrino aad keeni kartaa in ay aaminsan yihiin in waxa ay noqon doontaa fudud si aad u hesho magangelyo ee Kanada. Laakiin waxaa aad u adag si aad u hesho magangelyo. Oo waxaa jira khataro in uu yimid rasmi ah ee Canada.
Ka hor inta aadan go'aan gaarin, watch video hoose iyo this page akhri oo ka socda dawladda Canada oo ku saabsan magangelyo ee Kanada - maxaa dhici doono?
Fadlan daawado this video oo ka socda dawladda Canada.
video Tani waxay sidoo kale waxaa laga heli karaa Creole iyo Isbaanish.
Maxaa kale ee aan ogaado oo ku saabsan magangelyada ku dhex dalbanaya Kanada?
Kanada waxay sumcad u leedahay in ay furan iyo naxariis soogalootiga. Madaxda Its ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan qaxootiga. Kanada waxay u muuqataa in ay bixiyaan fursado weyn in dadka cusub. All of this waa run muhaajiriinta qaar ka mid ah, laakiin xaqiiqada dhabta ah ee dadka kale waxaa laga yaabaa kala duwan:
Dad badan oo aan loo ogolaan doonaa inuu joogo
Muhaajiriin badan oo aadan u qalmin magangelyo. Haddii aadan u qalmin, aad u badan tahay in lagu soo celiyo masaafurin doono dalka aad ka soo jeedo, tusaale ahaan Haiti ama El Salvador. Waa lagama yaabo in aad la dib loo ogolaan doonaa inuu Maraykanka.
Waxaa jira waqti dheer la sugi go'aan
Xitaa haddii laguu oggol yahay inay magangalyo dalbadaan, aad sugi doonaa ilaa wakhti dheer ka hor inta dacwaddaada la maqlay. nidaamka socdaalka Canada ayaa baaqday ka mid ah 40,000 xaaladaha. Waxa ay noqon kartaa laba sano ka hor intaadan helin go'aan. Inta aad sugeyso, Si kastaba ha ahaatee, waxaad ka heli doontaa faa'iidooyinka iyo oggalaansho shaqo.
Yaa uusan u qalmin magangelyo ee Kanada?
Dawladda Canada ayaa shuruudaha gaarka ah qof in la tixgeliyo qaxooti. Haddii aadan la kulmi iyaga, waxaa lagu weydiin doonaa in uu ka tago ama laga saaro. Xukuumadda laha barnaamijyo gaar ah oo haysta TPS ka yimid Maraykanka.
Legal galo ka Maraykanka
Dadka qaarkood, waxaa suurtagal ah in magangalyo ee Kanada timaado si sharci ah ka Maraykanka. Tani waa sababta oo ah waxaa jira afar nooc oo ka reeban:
marka laga reebo xubin ka tirsan qoyska
marka laga reebo carruurta aan lala socon
ka reeban haysta Document
ka reeban Danaha bulshada
Read ku saabsan ka reeban on bogga dawladda Canada oo ku saabsan qaxootiga. Mid ka mid ah marka laga reebo ka codsan kartaa in aad.
nidaamka cusub ee codsadayaasha magangelyo USA
Ogow xuquuqdaada qaxooti ah oo dalka Mareykanka ah
Macluumaadka on this page ka timaadaa dowladda Canada oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu tala galay in wax lagu baro dadka cusub oo ku saabsan halista ah in ay Kanada ka socday. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.